प्रधानमन्त्रीले फोहरबाट ग्यास निकाल्छु भन्दा उडाउनेले यो पढ्नुहोला ! | suryakhabar.com
Home उर्जा प्रधानमन्त्रीले फोहरबाट ग्यास निकाल्छु भन्दा उडाउनेले यो पढ्नुहोला !
on: ४ मंसिर २०७५, मंगलवार १३:२६ In: उर्जा, प्रदेश 5Tags: No Comments
तुलसीपुर । केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुदाँ हावाबाट बिजुली र फोहरबाट ग्यास निकाल्छु भन्दा धेरैले हासो मजाकमा उनलाई उडाइएको थियो । हावाबाट बिजुली त धेरै महिना अगाडी मुस्ताङ लगायत धेरै स्थानमा निकालिसकिएको छ तर अब दाङमा फाहोरबाट ग्यास निकालिने भएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले फोहरबाट ग्यास उत्पादन गर्न निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको हो ।
उपमहानगरका प्रमुख नरुलाल चौधरी, कम्पनीका निर्देशक श्रीराम अधिकारी र केन्द्रका कार्यक्रम व्यवस्थापक प्रकाश आर्यालले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
रु २० करोडको लागतमा स्थापना हुने उक्त ग्यास उद्योगका लागि ६० प्रतिशत निजी कम्पनी र ४० प्रतिशत विश्व बैंकले व्यहोर्ने भएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका–१६ करौटी डाँडामा रहेको ल्याण्डफिल साइटमै उक्त ग्यास उद्योग स्थापना गरिने भएको छ ।
अब लगत्तै निर्माण प्रक्रिया थालिने र १४ महीनामापछि ग्यास उत्पादन गरिने उक्त कम्पनीले जनाएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका क्षेत्रबाट सङ्कलित कुहिने फोहरबाट दैनिक एक हजार ३०० किलो ग्यास र छ टन जैविक मल उत्पादन गरिने भएको छ । उत्पादन थालेको पाँच वर्षसम्म उपमहानगरपालिकाले फोहर सङ्कलन तथा ढुवानीमा सहयोग गर्नुपर्ने र २० वर्षपछि उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
कलङ्की–नागढुङ्गा सडकखण्डमा बिजुली काटियो, यस्तो छ कारण
४ मंसिर २०७५, मंगलवार १३:२६